China Ophthalmology AB Ultrasound Diagnostic Apparatus (AB) Kugadzira uye Fekitori | SDK
Ophthalmology AB Ultrasound Kuongorora Zvishandiso (AB)
Kambani yedu ine kodzero dzakazvimirira dzepfuma yechigadzirwa ichi, uye yawana zvitupa zvepamutemo. Chigadzirwa chacho chasvika padanho repamba rinotungamira uye repasirese repamberi mukuyera kwekuyera, kuyera kwekuyera uye B-scan yemhando yemufananidzo weA-ultrasound, kunyanya iko kiriniki yekushandisa, inova yakangwara uye ine hunhu. Zvigadzirwa zvinoshandiswa muzvipatara zvese pasirese, uye zvakahwina kurumbidzwa kwakafanana.
Iyo midziyo ine zvinotevera hunhu:
Kutanga, chimbo chekuongorora chakareruka uye chakaumbana, iine Ultra-yakafara voltage renji ye90V-264V uye 50 / 60Hz, iyo inogona kuchinjika kune akasiyana mamiriro akaomarara.
Chechipiri, iyo A-ultrasonic kuyera kukosha kwakarurama, uye iko kuyerwa kwakaringana 0.02mm; muchipatara. Zvinoenderana nemhinduro yakapihwa, zviyero zveyero yeAB ultrasound uye iyo A ultrasound yakaenzaniswa nezvakayerwa mhedzisiro yeIOL tenzi uye lenstar900 panguva imwe chete, iko kukanganisa kuri mukati me0.02mm. Kana uchinge wasangana nevarwere vakasarudzika, vakadai sevarwere vane dense cataract, iko kunyatso kurongeka kwemuchina wekambani yedu A zvakare yakakwira zvakanyanya kupfuura mimwe michina yakafanana. Muchina wekambani yedu unoshandisa advanced processing technology uye algorithms mukugadzirisa uye kuzivikanwa kweA-ultrasound maungira. Iyo echo senzwi iri kumusoro, iyo upamhi yakatetepa, uye inogona nehungwaru kuziva iyo yekumberi imba, lens, uye retina.
Kana iyo yekumberi imba uye lens echo haigone kunyatso kuzivikanwa kana uchiyera compact cataract, semuenzaniso, kana iyo yekumberi imba ichiyerwa ne2mm shoma lens uye 2mm mamwe lens, iwe unonzwa kuti iyo yakazara axial urefu haina kuchinja, muchokwadi (2 /1532*1661-2=0.17), Nekuda kwemusiyano wezwi velocity, yekupedzisira mhedzisiro pakureba kweiyo eye axis inogona kusvika 0.1-0.2mm.
Next: Ophthalmology Yakagadziriswa Frequency Kaviri Laser MD-960